degree of dhib, fudud , dhexdhexaad ah , adag , Aad u adag
waxay u baahan tahay xisaabta ( )
waxay u baahan tahay sireed ( )
xog ururinta ( )
ugu cadcad my ( )
[ , ] In cutubka, waxaan ahaa mid aad u wanaagsan oo ku saabsan post-stratification. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu had iyo jeer ma hagaajiyo tayada qiyaasaha. Dhisaan xaalad post-stratification karaa yareyn kartaa tayada qiyaasaha. (Waayo, oggayn, arki Thomsen (1973) ).
[ , , ] Design iyo baadhid aan jaaniska ah oo ku saabsan Amazon MTurk si aad u weydiiso oo ku saabsan lahaanshaha qoriga ( "Ma, ama ma jiraa qof qoyskaaga, leedahay a qoriga, qoriga ama bistoolad? Ma in adiga ama qof kale ee qoyskaaga?") Iyo aragtida laga qabo gacanta qoriga ( "Maxaad u malaynaysaa ka muhiimsan-in la ilaaliyo xaq u of Americans in ay leedahay qoryaha, ama in la xakameeyo lahaanshaha qoriga?").
Muddo intee le'eg aad sahan qaadan? Intee in le'eg ayey ku kacaysaa? Sidee ku tirakoobka of keydinta shaybaarkaaga ha is barbar in ay tirakoobka dadweynaha Mareykanka?
Waa maxay qiyaasta xumu lahaanshaha qori isticmaalaya keydinta shaybaarkaaga?
Sax u-matali aan of keydinta shaybaarkaaga la isticmaalayo post-stratification ama qaar ka mid ah farsamada kale. Haddaba waa maxay qiyaasta lahaanshaha qoriga?
Sidee qiyaasta aad ha is barbar in qiyaasta ugu dambeeyay ee ka Center Research Pew? Maxaad u malaynaysaa sharxi isdhaaf ah, haddii ay jiraan waa wax?
Ku celi layliga 2-5 dabeecadaha xagga gacanta ku qori. Sidee Natiijooyinka aad ha ku kala duwan yihiin?
[ , , ] Goel iyo asxaabtii (2016) ay maamusho baadhitaan aan jaaniska ku salaysan ka kooban 49 su'aalo u arkaan taas oo la doortay badan-ka Survey Guud ee Bulshada (GSS) iyo sahan xulo barbaro by Center Research Pew on Amazon MTurk. ka dibna waxay ku qabsato u-matali aan xogta la isticmaalayo post-stratification model-salaysan (Mr. P), iyo isbarbar dhig qiyaasaha beddelo wuxuu la jiraa kuwa lagu qiyaasay iyadoo la isticmaalayo sahan itimaalka ku salaysan GSS / Pew. La sameeyo sahan isla on MTurk iyo isku dayaan in ay sii wadaan 2a Jaantuska iyo 2b Jaantuska by barbar aad qiyaasaha hagaajiyay la qiyaasaha ka soo wareeg ugu dambeeyey ee GSS / Pew (Ka eeg Lifaaqa Table A2 liiska 49 su'aalaha).
Isbarbardhigaan oo natiijooyin aad u natiijooyinka ka Pew iyo GSS.
Isbarbardhigaan oo natiijooyin aad u natiijooyinka ka soo sahan MTurk ee Goel, Obeng, and Rothschild (2016) .
[ , , ] Cilmiga badan ayaa u isticmaali tallaabooyin is-warbixin xogta hawl telefoonka gacanta. Tani waa meel xiiso leh halkaas oo cilmi is barbardhigi kartaa dhaqanka is-sheegay la dhaqanka qortey (eeg tusaale ahaan, Boase and Ling (2013) ). Laba dabeecado caadi ah si aad u weydiiso oo ku saabsan ka soo wacayso iyo qoraalka, iyo laba loox waqti badan waxay kala yihiin "shalay" iyo "in todobaadkii la soo dhaafay."
Ka hor inta ururinta wixii macluumaad ah, taas oo ka mid ah is-warbixin tallaabooyin ayaad u malaynaysaa waa badan oo sax ah? Waa maxay sababta?
Qortaan 5 of saaxiibadaa si ay u noqon in aad baadhitaan. Fadlan si kooban u soo koobaan sida 5 saaxiibo ahaayeen raystay. Nidaamka sampling this abaari leexsanideena gaar ah in qiyaasaha aad?
Fadlan iyaga soo socda micro-baadhitaan weydii:
"Imisa jeer baad u isticmaalaan telefoonada gacanta iyo kuwa kale wac shalay?"
"Imisa qoraalka fariimaha ma kuu soo diri shalay?"
"Imisa jeer baad u isticmaali telefoonka gacanta dadka kale wici in toddobadii maalmood ee la soo dhaafay?"
"Sidee marar badan ku sameeyey aad isticmaasho telefoonka gacanta si diro ama la helo fariimaha qoraalka / SMS in toddobadii maalmood ee la soo dhaafay?" Marka sahanka dhamaato, weydii in ay hubiyo xogta isticmaalka ay qortey by ay phone ama adeeg bixiyaha.
Sidee isticmaalka is-warbixin barbar gasho xogta? Waa kuwee waa ugu sax ah, kaas oo ugu yaraan waa sax?
Haddaba isku xogta aad soo ururiyay la xogta ka dadka kale ee fasalka (haddii aad samaynayso hawl this fasalka a). Iyadoo dataset this weyn, ku celi qayb (d).
[ , ] Schuman iyo Presser (1996) ku doodaya in amarada su'aal muhiim lahaa laba nooc oo ah xiriirka ka dhaxeeya su'aalo: su'aalo qayb qayb-meeshii laba su'aalo yihiin heer la mid ah koobnaanta (sida ratings ee labada musharrax madaxweyne); iyo su'aalo qayb dhan-halkaasoo su'aal guud socota su'aal gaar ah (tusaale ahaan weydiinaya "Sidee ayaad ku qanacsan tahay shaqadaada?" raacay by "Sidee ayaad ku qanacsan tahay noloshaada?").
Waxay dheeraad ah sifaha laba nooc oo si su'aasha saamayn: saamaynta joogta ah waxay dhacdaa marka jawaabaha su'aal ka dib waxaa la keenay dhow (ka badan haddii kale noqon lahaa) kuwii la siiyey su'aasha hore, iska saamaynta dhacdaa marka waxaa jira kala duwanaan weyn oo u dhexeeya jawaabaha labada su'aalood.
Samee labo ka mid ah su'aalaha soo qayb qayb-in aad u malaynayso yeelan doonaa saamayn badan oo si su'aasha, labo ka mid ah su'aalaha soo qayb-dhan in aad u malaynayso yeelan doonto saamayn si weyn, iyo labada ciyaaryahan kale oo su'aalo ah oo si aad u malaynayso in aan micno lahaa. Orod tijaabo baadhitaan on MTurk inay tijaabiso su'aalahaaga.
Sidee weyn ahaa saamayn qayb qayb-aad ay awoodaan si ay u abuuraan? Ma joogta ah ama ka duwan saamayn?
Sidee weyn ahaa saamayn qayb-dhan aad ay awoodaan si ay u abuuraan? Ma joogta ah ama ka duwan saamayn?
Waxa uu ahaa waxaa saamayn si su'aal ee Labada meel aanad wax ku qabaa amarka muhiim lahaa?
[ , ] Dhisida shuqulkii Schuman iyo Presser, Moore (2002) wuxuu qeexayaa aragti u gaar ah oo si su'aasha saamayn: daro iyo subtractive. Iyada oo ka duwan oo joogta ah saamaynta waxaa soo saaray sida natiijo ah oo qiimeyn jawaabaha 'oo ka mid ah laba waxyaabaha la xiriira midba midka kale, isku darka iyo saamaynta subtractive waxaa soo saaray marka jawaabaha la sameeyey in ka badan xasaasi u ah qaab dhismeedka weyn gudahood oo su'aalo ayaa la gaarsiiyay. Read Moore (2002) , ka dibna la qorsheeyo oo ay maamulaan tijaabo baadhitaan on MTurk si ay u muujiyaan daro ama subtractive saamaynta.
[ , ] Christopher Antoun iyo asxaabtii (2015) la sameeyey baadhitaan barbar-baarka sahlanaato afar ilo shaqaalaynta online kala duwan helay: MTurk, craigslist, Google AdWords iyo Facebook. U samaynta baadhitaan fudud iyo qortaan ka qaybgalayaasha iyada oo ugu yaraan laba ilo kala duwan shaqaalaynta online (waxay noqon karaan ilo kala duwan oo ka mid ah afarta ilaha loo isticmaalo Antoun et al. (2015) ).
Is barbar dhig qiimaha halkii xubin cusub, marka la eego lacagta iyo waqtiga, inta u dhaxaysa ilo kala duwan.
Barbardhig kooban ee tijaabada ah oo laga helay ilo kala duwan helay.
Isbarbardhig tayada xogta u dhexeeya tijaabada ah. Wixii fikrado ah oo ku saabsan sida loo qiyaaso tayada xogta ka soo jawaabay, arki Schober et al. (2015) .
Waa maxay ilaha aad door bidayso? Waa maxay sababta?
[ ] YouGov, oo ah shirkad cilmi suuqa internet ku salaysan, sameeyay doorashada online of guddi ah oo ku saabsan 800,000 jawaabaha ee UK oo loo isticmaalo Mr. P. in la saadaaliyo natiijada Aftida EU (ie, Brexit) halkaas oo cod UK codeeyaan sidoo kale in ay sii ama ka tago Midowga Yurub.
Sharaxaad faahfaahsan oo ah model tirakoobka YouGov ayaa halkan jooga (https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/). Ku dhowaad hadlayay, YouGov maqaal qoruhu cod-galay noocyada ku salaysan 2015 doorasho cod doorashooyinka guud, da'da, aqoonta, jinsiga, taariikhda waraysiga, iyo sidoo kale doorashada ay ku nool yihiin. Marka hore, waxay xogta la soo ururiyay ka si naflacaaranimo YouGov loo isticmaalo in la qiyaaso, ka mid ah kuwa kuwaas oo u codeyn, saamiga dadka nooc kasta oo cod-damacsan in ay codeeyaan Leave. Waxa ay qiyaaseen ayey doorasho ee cod-nooc kasta oo isticmaalaya 2015 British Doorashada Study (BES) post-doorashada fool-ka-fool sahan, kuwaas oo la ansixiyey ayey doorasho ka duub doorashada. Ugu dambayntii, waxay la qiyaaso inta qof ee waxaa jira nooc kasta cod-in codbixiyayaasha ku salaysan Tirakoobka dambeeyay iyo Survey Population Annual (macluumaad intaas dheer qaar ka mid ah ka BES ah, xogta sahanka YouGov ka doorashada guud, iyo macluumaad ku saabsan sida dad badan u codeeyay xisbi walba uu ku doorto kasta).
Saddex maalmood ka hor cod, YouGov tusay hogaanka labo dhibcood for Leave a. Habeeynimadii of codbixinta, codbixintan tusay aad ugu dhow wac (49-51 Remain). Baadhitaanka ayaa final-on-maalinta saadaaliyay 48/52 ay guushu ku joog (https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Dhab ahaantii, qiyaasta this seegay natiijada kama dambaysta ah (52-48 Leave) boqolkiiba afar dhibcood.
Isticmaal qaabka baadi baadhitaan guud ee lagaga dooday cutubkan si ay u qiimeeyaan waxa ka tageen ayaa laga yaabaa khalad ah.
jawaab YouGov ee doorashada (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) ka dib yiri: "Tani waxa ay u muuqataa in qayb weyn ay sabab u tahay tiro - wax aan ku sheegay oo dhan muhiim u noqon doonto natiijada sida tartan jar isku dheeli tiran. model Our ayey doorasho ahayd mid ku salaysan, in qayb ka, in jawaabaha uu u codeeyay doorashadii la soo dhaafay guud iyo heerka tiro kor ku xusan in doorashooyinka guud ee ka murugoodo model ah, gaar ahaan Waqooyiga. "ma bedesho jawaab inay ka qayb (a)?
[ , ] Qor jilitaanka ah in lagu muujiyo mid kasta oo qalad wakiilnimo ee Jaantuska 3.1.
Abuur xaalad khaladaad kuwan dhab kansashay.
Abuur xaalad ay khaladaad ku sii labanlaabi kasta oo kale.
[ , ] Cilmi ee Blumenstock iyo asxaabtii (2015) dhismaha model waxbarashada makiinad u isticmaali kartaa xogta raad digital in la saadaaliyo jawaabaha sahanka lug. Hadda, aad u socoto in ay isku dayaan wax la mid ah la dataset a kala duwan. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) ayaa lagu ogaaday in Facebook jecel saadaalin karaa sifooyin qofka iyo sifooyinka. Waxa la yaab leh, saadaasha u noqon karaan xitaa more sax ahayn kuwa of saaxiibadiis iyo (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .
Read Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) , iyo faa'ideysan Jaantuska 2. xogta waa la heli karaa halkan: http://mypersonality.org/
Haddaba, faa'ideysan Jaantuska 3.
Ugu dambeyntii, isku day ay model on your xogta Facebook gaar ah: http://applymagicsauce.com/. Sida fiican u shaqeeyaan idiin sameeyo?
[ ] Toole et al. (2015) diiwaanka faahfaahsan isticmaalka wac (CDRS) ka telefoonada gacanta in la saadaaliyo isbeddellada shaqo wadar ahaan labada lug.
Isbarbardhigaan oo design ee Toole et al. (2015) la Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
Ma waxaad u malaynaysaa CDRS bedelo sahan dhaqanka, iyaga dhameystir ama looma isticmaali karo oo dhan, waayo, dadka siyaasadda dowladda si ay ula socdaan shaqo la'aanta? Waa maxay sababta?
Maxaa caddayn aad ka dhaadhiciyo in CDRS si buuxda u bedeli kartaa tallaabooyin dhaqanka ee heerka shaqo la'aanta?